သက်ဦး: နိဂုံး (ဘီလူးတို့ရွာ - ကြေးမုံဦးသောင်း)
နိဂုံး (ဘီလူးတို့ရွာ - ကြေးမုံဦးသောင်း)
တင်မောင်၏ စာအုပ် ပြီးသွားပြီဖြစ်လေရာ နိဂုံးချုပ်အဖြစ် အဘယ်ကြောင့် ဤစာအုပ်ကို ရေးရသနည်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါသည်။
ပထမအချက်မှာ တင်မောင်သည် စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတဦးမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ခိုက်ချိန်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသစ်ကို တည်ထောင်ရာတွင်လည်းကောင်း ဗမာ့တပ်မတော်သည် ကျနော်နှင့် ဖွားဘက်တော်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ တင်မောင်၏ နိုင်ငံရေးဆရာသာမက သူငယ်ချင်းများ ဆွေမျိုးများတို့သည် တပ်မတော်အတွင်းတွင် ပါရှိကြပါသည်။ တပ်မတော်ကို ချစ်သူဖြစ်သဖြင့် လူထုအကျိုးကို ထမ်းရွက်သော ပြည်သူချစ် တပ်မတော် ဖြစ်မြောက်ရေးကို လိုလားသူဖြစ်သည်။
(၄၃) သန်းသော လူထုကြီးတွင် ပါဝင်သော လူတဦးအနေနှင့် အားနွဲ့သေးငယ်သော သာမန်နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်သူ တင်မောင်အဖို့ ဦးနေ၀င်းနှင့် သူ၏လက်ကိုင်တုတ်စစ်တပ်ကြီးကို ထိပ်တိုက်တွေ့မိသောကြောင့် မိသားစုပါ ဘ၀တခုလုံး ပျက်သွားကာ နေထိုင်ရန် မြေ၊ မှီတင်းရန် နိုင်ငံပင်မရှိတော့သည့် နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်တဦး ဖြစ်စေကာမူ ဦးနေ၀င်းကိုလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်ကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်း၊ ဒေါသသိုခြင်း၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း စိတ်ထားများ စိုးစိမှ မရှိပါ။ ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားတို့အဖို့ ပုလိပ်ရောဂါ၊ ကျောက်ရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ စသည်တို့က ဖိစီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံကြရရာတွင် ထိုရောဂါများကို မုန်းတီးနေခြင်းဖြင့် အကျိုးမရှိပါ။ ရောဂါကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေး၊ အောင်နိုင်ရေးကိုသာ အားထုတ်နေခဲ့ကြသကဲ့သို့ တပ်မတော်ပြုပြင်ရေးကိုသာ အားထုတ်လိုပါသည်။
“ခိုက်ကြုံဝိဘက်၊ သံသာဆက်၌၊ ကြိုက်လတ်တုံမူ၊ တုံ့မယူလို” ဟု အနန္ဒသူရိယ အမတ်ကြီး ရေးသားသကဲ့သို့ ရန်မတုံ့လိုပါ။ အကယ်၍ ဦးနေ၀င်းတယောက် တင်မောင်ရှိရာဒေသသို့ ဒုက္ခနှင့် ပြေးလာရသောအဖြစ်နှင့် ကြုံပါက ကယ်တင်ကူညီမည့်သူမှာ တင်မောင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဦးနေ၀င်းနှင့် သူ၏ စစ်တပ်ကို မုန်းတီးမှုမရှိခဲ့ဖူးသောကြောင့် တပ်မတော်ပြုပြင်သင့်သည်များကို ပြုပြင်ရန် အကြံပေးချက်များကို တပ်မတော်အကြီးအကဲများထံသို့ အတွင်းစာများ ပေးပို့လေ့ရှိသည်ကို သူတို့သိကြပါသည်။
တပ်မတော်ပြုပြင်ရေးအတွက် တပ်မတော်၏ အပြစ်အနာများကို ဝေဖန်ရေးသားသည်ဖြစ်ပါသည်။ ဦးနေ၀င်းနှင့် သူ၏တပ်မတော်က ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုကြီးများသည် ကြီးမားများပြားလွန်းပါသည်။ သူတို့ ကျင့်ကြံသော ရာဇ၀တ်မှုကြီးများသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် မကြားစဖူး၊ မကြုံစဖူး၊ ယုံကြည်ဖွယ်မရှိသလောက် ထူးခြား၊ ဆိုးရွား၊ ဆန်းပြားလှပါသည်။ ထိုသို့ ရက်စက်မှု ကမ်းကုန်အောင် နှိပ်စက်ခဲ့သော အမှုမျိုးများ ထပ်မံမပေါ်စေရန် နောင်လာနောက်သားတို့အတွက် မှတ်တမ်းတင်သင့်သဖြင့် ဤစာအုပ်ကို ရေးသားသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
တင်မောင်ထွက်ခွာပြီးသည့် နောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်များကို စာဖတ်သူများ ကောင်းစွာ သိရှိကြပါသည်။ ကျမ်းလေးမည် စိုးသဖြင့် အထူးအကျယ်ရေးသားရန် မလိုပါ။
အာဏာစက်သည် ကိုင်စွဲသူတို့ကို ပျက်စီးစေပါသည်။ အာဏာရှင်တစုက မိမိတို့သာ အာဏာကို အမြဲအစဉ် ထိန်းသိမ်းဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရေးအတွက် တပ်မတော်၏ စစ်အင်အား၊ လက်နက်အင်အားတို့ကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုတိုးချဲ့သည့် စရိတ်စက ကြီးမားခြင်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစု၏ အမြတ်ကြီးစား လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေးစနစ်ဖြင့် ခိုးဝှက်လုယက်နေသောကြောင့် နိုင်ငံတခုလုံး စီးပွားပျက်ကပ်ကြီး ဆိုက်နေပါသည်။ မီးလောင်သစ်တုံးကဲ့သို့ ပြာပူအုံးပြီး တရွေ့ရွေ့တိုတောင်းနေလေရာ နိုင်ငံကြီးပျက်စီးကာ လူမျိုးခြားတို့၏ ကျွန်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ သက်ရောက်နိုင်သည့်တိုင် အခြေအနေဆိုးရွားနေပါသည်။
ပြည်သူတို့ မည်ရွေ့မည်မျှ နစ်နာဆင်းရဲ ကျပ်တည်းငတ်မွတ်နေစေကာမူ လူထုကြီး၏ ဝေဒနာကို လျစ်လျူရှုကာ မိမိတို့အာဏာရရှိရေး ရည်ရွယ်ချက်တခုသာ ရှိသော စစ်ဝါဒီအုပ်စုတို့က အာဏာလွှဲမပေးလိုသဖြင့် ပြည်သူတို့အား ဖိနှိပ်နေရာတွင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို လုံးဝပိတ်ပင်ထားပါသည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများသဘောတူ ဟူသော စကားလုံးကိုပင် သုံးခွင့်မရှိတော့ပါ။ သတင်းစာများအဖို့ ရေလျှံခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ သဘာဝ သတင်းများပင် ရေးသားခွင့်မရှိတော့ပါ။ သူတို့လက်မှ လွတ်မြောက်ရေးမှာ လူထုကြီးတရပ်လုံး အားထုတ်မှသာ ဖြစ်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်က တော်လှန်ရေးအစိုးရဟု ကြေညာကာ လက်နက်နှင့် အာဏာသိမ်းချိန်မှ စတင်ကာ စစ်ဝါဒီကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက အာဏာကို ပြန်လည်ပေးရန် စိုးစိမျှ ရည်မှန်းချက်မရှိပါ။ စစ်ဝါဒနှင့် အုပ်ချုပ်ကာ စစ်ဗိုလ်များသာ နိုင်ငံတော်၏ ဓနစွမ်းအားမှန်သမျှကို ခံစားစေမည်။ အကြီးအကဲဖြစ်သော မိမိ၏ မိသားစုက နိုင်ငံ၏ သယံဇာတပစ္စည်းမှန်သမျှနှင့် အရပ်သားလူထုကြီး၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမှန်သမျှကို အလိုရှိသလို စားသုံးခံစားခွင့် ရှိသည်ဟု ယုံကြည်လုယက်နေသည် ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသို့ လုယက်သည်ကို ပြည်သူတို့က ကြည်ဖြူနိုင်သည်မဟုတ်သည်ကို ရှေးမဆွကပင် သိရှိသူဖြစ်သဖြင့် ဦးနေ၀င်းသည် အာဏာမသိမ်းမီကပင် စစ်အင်အားကို တိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ဂျီ (၃) သေနတ်များ စသည့် လက်နက်များနှင့် မြို့တွင်း၊ ရပ်ကွက်တွင်း ဆူပူသူများကို နှိမ်နင်းရန် အသေးစားသံချပ်ကာကားများ၊ စစ်သားတင်ယာဉ်များ စသည်တို့ကို ၀ယ်ယူကာ စစ်အင်အားကို ဖြည့်တင်းပြီးမှ အာဏာသိမ်းသည် ဖြစ်ပါ၏။
စစ်တပ်က သိမ်းယူထားသော အာဏာကို လက်နက်နှင့် ထိန်းသိမ်းထားရုံသာမက တဘက်ကလည်း ၀ါဒဖြန့် ကိရိယာများနှင့် ထိန်းထားပါသေးသည်။ သတင်းဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူသော ဤခေတ်ကြီးတွင် စာနယ်ဇင်း၊ ရေဒီယို ၀ါဒဖြန့်ယန္တရားကောင်းများကို သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသော အာဏာရှင်စနစ်တို့သည် သက်ဆိုးရှည်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအချက်ကို သိရှိသူ ဦးနေ၀င်းက ၀ါဒဖြန့်ဆောင်ပုဒ်များနှင့် လူထုမကျေနပ်မှုများကို ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အာဏာလုပြီး (၄) နှစ် ကြာသောအခါတွင် နိုင်ငံတော်၏ အာဏာကို မူလပိုင်ရှင် ပြည်သူလူထုကြီး၏ လက်သို့ ပြန်လည်အပ်နှင်းခဲ့ပါမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ၁၉၆၆ ခုနှစ် ကျိက္ကဆံကွင်း လယ်သမားညှိနှိုင်းပွဲတွင် စတင်ပြောကာ လိမ်လည်မုသားနှင့် လူထုကို မျက်စိလှည့်စားခဲ့ပါသည်။
အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသစ် ရေးသားပြီး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ၍ လွှတ်တော်သစ် ဖွဲ့စည်းသည်မှာလည်း လိမ်လည် မျက်လှည့်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဇာတ်ပေါင်းသောအခါတွင် စစ်ဝတ်စုံဝတ်ထားသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက သူ၏လက်မှ အာဏာကို တောင်ရှည်ပုဆိုးဆင်ထားသော အရပ်သားကြီး ဦးနေ၀င်းအဖြစ် ပြောင်းလဲယူငင်ထားသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံ၏ ဓနများကို မတရားခိုးဝှက်လွန်းသဖြင့် ပြည်သူအလုံးတို့က အုံကြွဆူပူကြသောအခါ ၀ယ်ယူသိုမှီးထားသော ဂျီ (၃) သေနတ်များနှင့်ပင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ကာ စစ်အစိုးရသစ်အသွင် အာဏာကို လုယူခဲ့ပြန်ပါသည်။ အမည်သစ်များနှင့် တက်လာသော စစ်အစိုးရများက အမျိုးသားညီလာခံကြီး ကျင်းပကာ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသစ် ရေးသားပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ထောင်မည်ဟု အော်ဟစ်နေသည်မှာလည်း လိမ်လည်နေသော မုသားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဗိုလ်တစုက ရယူထားသော အာဏာကို မည်သည့်အရပ်သား ကိုမှ လွှဲပြောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ပြည်ပဖိအားပေးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မုသားအမျိုးမျိုး ပြောနေမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်တစုတို့က တပ်မတော်ကြီးကို လက်ကိုင်တုတ်ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တပ်မတော်သည် နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ပေးသော ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သဖြင့် လွတ်လပ်ရေးတည်မြဲရန်အတွက် တပ်မတော်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု ၀ါဒဖြန့်သည်မှာလည်း မုသားသာ ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော်သည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် နောက်တန်းမှ ပါလာသော အဖွဲ့အစည်းအငယ်စားတခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး နိဂုံးအဖြစ် စာဖတ်သူ၏ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွင်လန်းကြပါစေဟု မေတ္တာပို့ကာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုသော်လည်း မပြုနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူ မြန်မာပြည်သူတို့အဖို့ စစ်ဝါဒီ သွေးစုပ်တစုကို ဖယ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး လူထုကြီးအဖို့ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း တို့ကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်လေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့စစ်အင်အား လေးသန်းကျော်ရှိစေကာမူ တပ်မတော်ကြီးတခုလုံးသည် လူထုကြီး၏ အသွေးအသားကို စုပ်မျိုလိုသော စစ်ဝါဒီများမဟုတ်ကြပါ။ တပ်မတော်မိသားစုများနှင့် ဆွေမျိုးများတို့သည်လည်း စစ်ဝါဒီတို့ သွေးစုပ်မှုကြောင့် ဆင်းရဲတွင်း နစ်နေကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း တန်ခိုးကြီးဘုရားများတွင် ချိပ်ဆွဲထားသော ဓာတ်ပုံကြီး (၅) ခုမှ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး (၅) ဦးနှင့် လက်ဝေခံ စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုင်ရှင်တစုတို့ကိုသာ ဖယ်ရှားရန်လိုပါသည်။ သူတို့ကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံကြီးငယ်များတို့ကို မျှော်လင့်အားထားနေသည်မှာ အကျိုးမရှိပါ။ မည်သူကမှ၊ မည်သည့်နိုင်ငံကမှ မြန်မာပြည်အတွက် သွေးနှင့်ချွေးကို အသုံးပြုကာ တိုက်ခိုက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကို ဖယ်ရှားရန်မှာ ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့သာ တတ်စွမ်းနိုင်ပါသည်။ ပြည်သူတို့က အားမထုတ်လျှင် ပြည်သူတို့သာ ခံကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူလူထုကြီးတို့က သွေးစုပ် စစ်ဝါဒီတစုကို ဖယ်ရှားနိုင်ကာ စိတ္တသုခ၊ ကာယသုခနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေဟု မေတ္တာပို့ ဆုတောင်း နေပါကြောင်း။ ။
Posted by Thet Oo at 9:35 PM
hote pa byar. ko arr ko kooooo ma ya mae.)
ပြန်လည် ဝေမျှပေးသော ဦးသက်ဦး ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ မသိခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းကို ပိုပြီး သိရှိလာရသောကြောင့်ပါ။ အမိနိုင်ငံတော်ကြီး စစ်ကျွန်ဘ၀မှလွတ်မြောက်ပါပြီး ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော ပညာရှိ သူသာ ဦးဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
- “မြန်မာ့စစ်အင်အား လေးသန်းကျော်ရှိစေကာမူ” နေရာမှာ လေးသိန်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ခင်ဗျ။
- “စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစု၏ အမြတ်ကြီးစား လက်ဝါးကြီးအုပ် ” ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ “အမြတ်ကြီးစား” ဆိုတာထက် “ကုတ်သွေးစုပ်” ဆိုတဲ့အဆင့် ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါတယ်။
ဖတ်လို့က ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဖတ်ပြီးတော့လည်း မနေနိုင်လို့ ဝင်ရှုပ်မိတာပါ။ :-)
စာဖတ်ပြီးလို့ စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းမကောင်း ပြောတာဟာ ၀င်ရှုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်။
“စစ်အင်အားလေးသန်း” မမှန်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် စာအုပ်ထဲပါတဲ့အတိုင်း ပြန်ရိုက်ရတာမို့ ပြင်ဆင်တာ မလုပ်ဖြစ်တာပါ။ အင်း .. လေးသိန်းတောင် အတော်များနေတာ၊ လေးသန်း ဆိုရင်တော့ …
(၅၈) ပြုချင်ရာပြုနိုင်သော ဦးနေ၀င်း၏ ဒေါသ
(၅၇) နိုင်ငံမရှိသော ဒုက္ခသည်တယောက် (ကြေးမုံဦးသောင်...